Habka Hawlgalka Qalabka Khadka Soo -saarka Juuska
Qalabka khadka wax -soo -saarka cabitaanka cabitaanka tamaandhada, habka hawlgalka soo -saarka cabitaanka yaanyada: (1) Xulashada alaabta ceyriinka ah: yaanyada leh qaan -gaar, ku -habboon, midab guduudan oo dhalaalaya, cayayaan ma leh, dhadhan hodan ah iyo adkaha dhalaalaya oo ka weyn 5% ama ka badan ayaa loo xushay alaabta ceeriin. (2) Clea ...
Quruxda Waxqabadka Casiirka
Casiirka canabku wuxuu ka kooban yahay nooc ka mid ah citric acid oo si weyn loogu isticmaalay daryeelka maqaarka. Casiirka canabku wuxuu ka kooban yahay polyphenols canab badan oo casiir Cherry ah, wuxuu kaa caawin karaa maqaarka wajiga cas cas cad, laalaabkii meel cad oo casiir hodan ah, co ...
Miraha Cananaaska badan leh Khadka Wax -soo -saarka Jam
khadka wax -soo -saarka macaanka miraha Laynkan ayaa ku habboon karootada, ka shaqaynta bocorka. Noocyada badeecadaha kama dambaysta ah waxay noqon karaan casiir cad, casiir daruuro leh, cabbitaan casiir leh iyo cabitaanno qallalan; Waxa kale oo ay soo saari kartaa budada bocorka iyo budada karootada. Khadka wax -soo -saarku wuxuu ka kooban yahay mashiinnada dharka lagu dhaqo, wiishashka, maran ...
Khadka Soo Saarka Casiirka ee Furuqa ah oo Toos ah
Khadka waxsoosaarka casiirka miraha/mashiinka samaynta casiirka cambaha Mango, cananaas, babayga, qalabka wax lagu guava Xarigani wuxuu ku habboon yahay ka shaqaynta miraha kulaylaha sida cambaha, cananaaska, babayga, guava iyo wixii la mid ah. Waxay soo saari kartaa casiir cad, casiir qallalan, casiir xoog leh iyo macaanka. Khadkan waxaa ku jira ...
Mashiinka Buuxinta Tamaandhada iyo Khadka Wax -soo -saarka
Mashiinka buuxinta tamaandhada iyo hordhaca khadka wax soo saarka: Jiilka cusub ee mashiinka buuxinta yaanyada waxaa soo saaray shirkadeena. Mashiinku wuxuu qaataa qiyaasta piston, wuxuu isku daraa elektaroonigga iyo pneumatic -ka, waxaana gacanta ku haya PLC. Waxay leedahay qaab -dhismeed isku -dhafan, naqshad macquul ah, sax ...
Khadka wax -soo -saarka Ketchup Tomato Paste
TOMATO PASTE HABEENKA KHADKA/MAKIINADDA SI LOO SAMEEYO JAMAC 1. Baakadaha: 5-220L durbaanada aseptic, daasadaha, bacaha, dhalooyinka iyo wixii la mid ah. nidaamka, nidaamka burburinta, nidaamka ka-hortagga jeermis-diidka, garaaca ...
Ku saabsan Caanaha
Xaaladda hadda ee wax soo saarka caanaha ee Shiinaha Iyada oo si joogto ah loo hagaajinayo heerarka nolosha dadka, macaamiisha gudaha waxay dalbadaan badeecooyin caano oo tayo sare leh. Warshadaha caanaha ayaa ah warshadaha ugu kobaca badan warshadaha wax soo saarka cuntada. Tan iyo dib -u -habaynta ...
Ku saabsan Ketchup
Dalalka ugu waaweyn ee soosaarka tamaandhada ee adduunka ayaa lagu qaybiyaa Waqooyiga Ameerika, xeebta Mediterranean iyo qaybo ka mid ah Koonfurta Ameerika. Sanadkii 1999 -kii, wax -soo -saarka adduunka ee goosashada yaanyada, soosaarka yaanyada ayaa kordhay 20% marka loo eego 3.14 milyan oo tan sanadkii hore ilaa ...
Ku saabsan Casiirka
Suuqa casiirka xoogga leh ayaa hoos u dhacaya, warshadaha casiirka NFC ayaa si xawli leh u kobcaya warshadaha cabitaanka Shiinaha ayaa leh ku dhawaad ​​hal tirilyan yuan oo la isticmaalo, iyo saami qaybsiga dadka ayaa go'aamisa in suuqa sumadda casiirka khudradda sare uu sidoo kale leeyahay baaxad suuq ah ...